ULuh ugonyuluka ngokumenze wakhala
UVELE wakhihla isililo ebona engungwa abantu ebhishi usomahlaya omncane uLusanda ‘Luh’ Mahlaba (6)
ZINHLE HLUBI | December 3, 2019
UTHWALE kanzima usomahlaya omncane ngesikhathi ezitetemukela ebhishi ngesonto eledlule. ULusanda “Luh” Mahlaba (6) ubonalala kwi-video eseyisabalele ezinkundleni zokuxhumana ethelekelwa abalandeli abebejabulela ukumbona, wavele wasikhihla isililo ngoba engaqondi ukuthi kwenzekani njengoba engazithathi njengosaziwayo.
ULuh uzakhele olukhulu udumo ngamahlaya awenza nomalume wakhe ongusomahlaya, uMthandeni Mahlaba, uthi wazithola esengungwe abantu abaningi, okuyikho okwamxaka njengoba agcina esekhala. Kuyona le video, uLuh ubonakala engungwe abantu besifazane abaningi abasuke befuna enze amahlaya akhe, emva kwemizuzwana ubonakala esekhala.
“Babengiphusha bengiyisa phambili ngenkani. Ngavele ngazikhalela,” kusho uLuh.
UMthandeni, noma ayengekho ngosuku lwesehlakalo, uthe akwehlanga kahle akubona ezinkundleni zokuxhumana. Useke wakuveza kwiSolezwe phambilini ukuthi akathandi ukuhamba noLuh noma eya emicimbini ngoba usemncane.
“Ngaloluya suku, uLuh wayehamba nomama wakhe, bevakashele ebhishi, eShaka Marine. Kwathi besahleli, kwaqhamuka obhuti asebekhulile abathathu bafika bamqukula bahamba naye baya esihlabathini solwandle bengashongo lutho kumzali wakhe. Wayengeke engathuki ngoba usemncane,” kusho uMthandeni.
Uthe okumphatha kabi kakhulu wukuthi laba bantu abazixakanga nokukhuluma nomuntu omdala, bavele bamjabulela base beyamthatha bengashongo lutho. “Angiqondi ukuthi uyithatha kanjani ingane phambi komzali wayo, ujike ungachazi lutho? Wayefanele wukwethuka ngoba usemncane. Ngiyazi ukuthi abantu bamkhonzile futhi mhlawumbe abakwenza bakwenza ngoba bejabula kodwa akungiphathanga kahle uma esekhala,” echaza.
ULuh uthe le nto eyenzeka ayibanga mnandi kuyena. “Ingiphatha kabi, angiyithandi,” kusho uLuh.